Computer embroidery - chii icho? Kugadzira? Inoita marii? Maitiro ekufungidzira?
Computer embroidery ndiyo yakasarudzika nzira yakanaka kwazvo yekushongedza zvipfeko. Iyo ine mukurongedza chinyorwa, chiratidzo kana logotype nekushandiswa kwetambo uye muchina-komputa inodzorwa komputa iyo yakadzoreredza maoko nhasi.
Tinogona kumhanyisa chaiko chero chinhu uye chero chinhu. Embroidery yemakomputa inoshandiswa zvinobudirira pamarudzi ese emicheka, vachigadzira yakasarudzika zvipfeko. Izvo zvipfeko zvinopfekwa nevashandi vekambani zvinovakira kuzivikanwa, mhando uye pfungwa yenharaunda. Vese vashandi, sevashandi vebhutsoka vakapfeka yunifomu, vanotamba muchikwata chimwe.
Embroidery yemakomputa inogona zvakare kushandiswa zvinobudirira kugadzira zvigadzirwa nemachira ekushambadza. Yakafukidzwa logo uye zita rekambani paT-shirts uye sweatshirts inogona kuve yakanaka chipo kune vatengi. Kupfeka zvipfeko zvedu zvekusimudzira, ivo vanozosimudzira yedu brand.
Nekudaro, embroidery yemakomputa haingoshandiswe pane zvipfeko. Iwe unogona zvakare kushongedza nekombuta pane kapu, mabhegi, tauro, bathrobes uye workwear.
Micheka yakashongedzwa uye zvakanyorwa zvakanyanyisa kusimba pane kubviswa nyore nyore uye vamwe vakavimbika vanoiswa glued pane zvipfeko, sekuita kweanogara decal.
Computer embroidery - iyo nhoroondo yekudhinda pane yekushambadzira zvipfeko
Vatova mumazuva ekare, vakadzi vakarongedza mapatani pane zvipfeko nematafura etafura neruoko.
embroidery zvinowanzove chinhu chetsika uye chiratidzo chenzvimbo yakapihwa uye nyika. Izvo zvakaringana kuyeuka yakakurumbira Kashubian kana yakakwirira embroidery, ino isinga sakani chinhu chevanhu vanopfeka.
Kuti amire pachena kubva muchaunga nenzira iyi, uye kunyatsojekesa zvikwata zvevanhu, yakakurumidza kushandiswa nevatengesi nevePR nyanzvi. Mushandi akapfeka nguo yakasarudzika yakasarudzika inobatwa zvakasiyana nevatengi. Semuenzaniso, sevatyairi vemapurisa, mapurisa nemauto vanoremekedzwa vakapfeka yunifomu, vashandi vezvimwe maindasitiri vanoonekwa zvakasiyana mumupfekero uye zvipfeko zvakasiyana. Ndosaka makambani mazhinji afunga kuisa mari mumayunifomu akasarudzika. Nekuda kweizvi, vashandi vavo vanogona kunzwa seimwe timu, vachitamba pamwe chete nechinangwa chimwe chete.
Embroidery zvinoreva zvakare gadget nehembe dzekushambadza. Wese munhu anoda zvipo, mahara kana mibairo. Kana akawana bhegi, cap kana T-shati ine chiratidzo chekambani, achanyatsoipfeka, nokudaro achishambadzira chiratidzo.
Kuvandudzwa kwehupfumi uye kudyidzana kwenyika dzepasi rose yakaita kuti kudiwa kwekumbundirwa kuwande gore rega rega. Sezvineiwo, kufambira mberi kwemaitiro emakomputa kwakakonzera kukura kwemikana. Parizvino, kurongedza zvakanyorwa uye mapatani pane akasiyana mhando dzezvipfeko uye zvishandiso ikozvino zvinokurumidza, zvakajeka, zvakarurama, zvinodzokororwa uye zvakachipa. Nhasi, zviuru zveumburuki zvinogona kuitwa pasina matambudziko, munguva pfupi, ivo vachasangana kunyange zvakanyanya kutarisirwa.
Maitiro ekugadzirwa kwemakombiyuta?
Computer embroidery - tekinoroji yekurongedza zvakanyorwa pazvipfeko
Mishini yemazuva ano yakarongedzwa nemaakisi mazhinji uye tambo dzemakara akasiyana. Iyo yekusevha inoita uye inomirirwa necomputer chirongwa. Kubva pane yakagadziriswa dhizaini, muchina unosarudza mavara akakodzera uye chimiro.
Maitiro ekugadzira dhizaini, zvigaro
Izvo zvakakwana kusarudza kuti ndeipi nzvimbo kana nzvimbo dzechinhu chaunoda kuti embroidery ive. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kusarudza dhizaini yayo uye saizi. Kazhinji, zvinyorwa zvakanyorwa zvine typeface yakakodzera nemalo emakambani nemasangano anodhindwa. Iyo pateni inofanirwa kutumirwa pamwe neakarongedzwa, uye nyanzvi dzedu dzichabatsira kuchinjanisa nezvinodiwa nemuchina wekusona komputa.
Kuonekwa ndechimwe chinhu chinoita kuti zvipfeko zvine mavara akasvibiswa zviratidze kunze. Yakanyatsogadzirwa embroidery inopa zvinhu chimiro chitsva. Iyo inonzwika kubatwa, inongoyevedza. Computer embroidery inopa zvipfeko uye accessories dhizaini uye yakanakisa, uye mhando yakashambadzirwa nayo inowana mukurumbira. Fungidzira maT-shirts maviri, imwe ine yakanyatsonongedzwa yekambani logo uye imwe ine kushambadzira foil yakanamatira pairi. Icho chifananidzo chinounza mupfungwa ye juxtaposition yemhando yakasarudzika, yakajeka Mercedes padhuze nepurasitiki uye yakachipa date.
Nekuda kweizvozvo, kusimba kwekushongedzwa kwekombuta kwakanyanya kusiyana kupfuura iko kwevanokwikwidza. Embroidery inenge ine yakafanana nekureba sezvipfeko zvainoshongedza. Hapana chikonzero chekushushikana kuti chiratidzo kana chinyorwa chinonyorwa mukuwacha kana kusaina. Embroidery yemakomputa chikamu chakakosha chechipfeko, uye kwete chete chinobviswa nyore, chisiri chechigarire chinowanikwa chinotaridzika chinoshatisa nekukurumidza.
Embroidery yemakomputa inogona kuva yeanenge chero ruvara. Izvo zvinogumira chete ndeye ruvara rwetambo inoshandiswa. Kurongedza kunoitwa nekuvhiya chaiko nekuda kwekutonga komputa.
Embroidery inogona kuve yakasarudzika munhu. Tekinoroji yemakomputa inobvumira chaiyo, inodzokororwa uye yakakwirira-resolution yekumonera mapatani, zviratidzo uye zvakanyorwa.
Nemavhoriyamu akakwira, embroidery inongobhadhara muhupfumi. Mutengo waro wakaderera, zvichiita kuti ive yakanakira yekushongedza mhando dzese dzehembe - mahembe, maT-shirts, polos, bhurukwa, zvipfupi - pamwe netauro, ngowani nehombodo.
Zvinokanganisa zvekushongedzwa kwemakomputa
Kupesana neyakajairika, yakazara-pamhepo kudhindwa kwemakomputa, hazvigoneke kukwezva mufananidzo wakazara neine ruvara rusina pendi. Nekudaro, izvi hazvisi izvo izvo izvo zviri zvese. Embroidery inoreva tsika, chifananidzo chekukudzwa, sezvo ichibatanidzwa nejasi remaoko achishongedza zvipfeko zvevanhu vakakwira. Izvo hazvina chekuita nekitschy, inoyevedza uye cheesy pendi.
Computer embroidery - zvigadzirwa zvakakurumbira uye zvipfeko zvekushambadzira
Polo shiti nejira rakashongedzwa
Kushamwaridzana kwekutanga pamwe ne embroidery? T-shati ine collar uye yakarongedzwa logo logo pa chest. Iko kusanganiswa kwekunze uye kupfeka kunyaradza. Ita kuti vanhu vafarire kupfeka t-shirts dzakadaro nemucherechedzo wekambani yako kana cheki.
T-shirts neakashongedzwa kambani logo uye zvakanyorwa
Kugadzirira kupfeka zuva rega rega. Rega vashandi vako kana vatengi vashambadzire brand yako yakapfeka masaga mapfupi yakashongedzwa nemucherechedzo wako kana chinyorwa chinovakurudzira kuti vashandise masevhisi ekambani yako.
Iyo yepamusoro-t-shati yepamusoro-soro uye yakarongedzwa-komputa maitiro kana kunyorwa ndiwo musanganiswa wakakwana uyo unobvumidza iwe kumira kunze kweboka revanhu vekuChina kushambadza-t-shirts ane akaderera-emhando uye akasimba kudhinda.
Shangu nejira rakashongedzwa
A classic hoodie inogonawo kushambadza chigadzirwa chako kana mhando. Sanganisa password yako, zita uye / kana logo pane iyo sweatshirt.
Computer yekumonera pamvere
Iwe unoda here kuti vashandi vako vadziyirwe uye panguva imwechete vanoona kambani iyi nembatya dzayo? Kana kuti zvimwe unoda kugadzira zvipfeko zvepamusoro zvekusimudzira kambani yako? Komputa yakashongedzwa makushe isarudzo yakakura.
Mashati ane embombuta yemakomputa
Yakanyanya kurongeka uye yakajeka? Ita kuti vashandi vako vashandire vatengi vakapfeka zvipfeko zvine mutsindo yekambani. Sarudza embombuta yemakomputa pane mashati.
Yakadhindwa mabhurugwa uye mapfupi
Haasi chete nguo yekumusoro yakanakira yekumonera chinyorwa kana chimiro. Embroider pamabhuruku kana zvipfupi kugadzira yakasarudzika zvipfeko.
Computer embroidery pamidziyo
Zvakaoma kufungidzira baseball caps isina iyo yakanamirwa logo yechikwata chako chaunofarira, yunivhesiti yakapedza kudzidza kana zita rechiratidzo. Gadzira iyo logo yeyako kana yekambani kukora ziso. Vasunge pamipendero.
Towels uye bathrobes ane mufananidzo wakarukwa uye zvakanyorwa
Hapana chinosiyanisa hotera uye SPA yakawanda seyakashongedzwa tauro uye yekugezesa. Shandura isina mazita, machira anofinha kuita chinhu chakasarudzika chinosimbisa hushamwari hwechinhu chako. Izvo zvinokudzwa iwe, asi zvakare pfungwa yekunaka kune vako vashanyi.
Mabhegi ane embombuta yemakomputa
Nzira yekuisa nyore nyore bhegi rine zita uye logo yekambani? Computer embroidery inoshanda zvikuru. Yakachipa uye inokurumidza, bhegi rakajairika rinogona kushanduka kuita chinosiyanisa chikamu chekambani yako.
Kupfeka kwekunyevera uye kombiyuta
Workwear inoshandawo yakakura seyekutakura yemacomputer embroidery. Zita, basa, zita rekambani uye logo - wakashongedza pane imwe sutu kana chimwe chakakoshesa basa uye chipfeko chakanyanya-kupfeka.
Embroidery yemakomputa - inobhadhara marii?
Embroidery yemakomputa yakachipa. Nekudaro, zvakawoma kunyatso tsanangudza mutengo wekukanda imwechete, nekuti ma paramita mazhinji anokanganisa mutengo uyu.
Computer embroidery ichave isingadhuri pane imwe unit yekukuraira. Mutengo wacho unofambiswawo nehukuru hwenzvimbo kuti ifukidzirwe, mhando yekumonera pachayo, hurema hwepateni pane iyo nzvimbo, huwandu hwetsono mitsetse pa cm.2 zvinhu, pamwe nenhamba yenzvimbo dzinofanirwa kuisirwa amburumbwa pachinhu ichocho.
Mutengo hauwanzo kukanganiswa nehuwandu hwemavara anoshandiswa, sezvo muchina wekusona une yakawanda tambo.
Tinokukoka iwe kune mumwe nemumwe kukoshesa kwemapurojekiti. Ndokumbira titumire iyo magirafu aunoda kuembesa uye neruzivo nezvehuwandu hwezvimedu zvakagadzirwa.
chii chinonzi embroidery yemakomputachii chinonzi Embroidery yemakomputakwaunogadzira kombiyutakombiyuta yemakomputakombiyuta yakamonera Białystokkomputa yakamonera Bielskokomputa yakadhirowewa naidgoszczkomputa kombiyuta mutengokombiyuta Embroidery mutengo rondedzerokomputa yakabatirira chii ichokomputa yakabatirira chii ichokombiyuta yakamonera yeCzęstochowayakachekwa embroidery gdańskkomputa yakamonera Gdyniayakachekwa embroidery gliwiceGniezno akashongedzerwa kombiyutakomputa kombiyuta kuti inoda mariiembroidery yemacomputer inotaridzikakomputa kombiyuta kuti ungatanga seikomputa yakarukwa nzira yekugadzirakomputa wakabatisa chii muchinakomputa yakabatirira chii pkdakashongedzerwa mucheka Kaliszyakachekwa embroidery katowicekomputa yakamoneredzwa muna kielcekombiyuta yakamonera Koninkombiyuta yemakomputa muKoszalinkompiyuta yakamonera Krakowkomputa chikepe embroiderykombiyuta Embroidery chikepe mutengo runyorwakomputa yakamonera Lublinkomputa yakashongedzwa paT-shirtskomputa yakamonera machirakombiyuta yakamonera Nowy Sączkomputa yakashongedzwa muOlsztynkombasi yekomboni muOpolemakompiyuta embroidery pabianicemakombiyuta embroidery poznańcomputer embroidery radomkombiyuta yakarukwa yeRybnikkomputa yakadhirowa reichskomputa yakamonera Silesiakomputa yakamonera Słupskkomputa yakashongedzwa muSosnowiecyakachekwa embroidery swarzędzkomputa yakashongedzwa yebristleskomputa yakarukwakombiyuta yemakomputa muTarnówkomputa yakashongedzwa muToruńzvemakomputa embroidery warawkomputa yakamonera waraw mutengo wemutengocomputer embroidery wrocławmacomputer embroidery maitirokomputa yakarongedza gomo rakasvibirirakukumbira komputa kwakawanda seimaitiro ekuita kombiyutamutengo wemakombiyutaembroidery yemakomputa inotaridzika seimaitiro ekugadzira emakombiyutanzira yekubvarura machira emakomputamaumbirwo emakomputa emakomputamaitiro ekugadzira emakombiyutaT-shitsiprintskushambadzira zvipfekokusona
dhizaini uye kuuraya: Pixels Yakakwana